Wasiirka Dekadaha Gaadiidka Badda oo la kulantay dhiggeeda Jabuuti – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Wasiirka Dekadaha Gaadiidka Badda oo la kulantay dhiggeeda Jabuuti
Jabuuti-(SONNA)- Wasiirka Dekadaha iyo Gaadiidka Badda Maryan Aweys, ayaa maanta xafiiskiisa ku booqatay, Wasiirka qalabka iyo Gaadiidka Dowladda Jabuuti Mudane; Muuse Maxamed Axmed.
Mas’uuliyiintan ayaa ka wada hadlay, xoojinta xiriirka iyo iskaashiga , gaar ahaan dhinacyada iskaashi ee labada Wasaaradood, iyada oo kulanka uu goob joog ka ahaa Agaasimaha Maamulka arrimaha Badda, Cali Mirax Shixam.
Wasiirka qalabka iyo Gaadiidka Jabuuti ayaa u xaqiijiyay dhiggiisa Soomaaliya in Jabuuti ay diyaar u tahay taageerida dedaalada horumarineed ee Dekadaha iyo Gaadiidka Badda, dib u qaabeynta Shaqaalaha iyo sare u qaadista iskaashiga labada Dal ee dhinacyada dhaqaalaha iyo khibradda.
"Waxa ay innaga dalbatay Wasiirka in aan u tababarno Shaqaalaha Wasaaradda inagu diyaar ayaan u nahay in waxii awooddeena ah aan ku tarno walaalaheenna Soomaaliya" ayuu yiri Wasiirka Gaadiidka Jabuuti.
Maryan Aweys, Wasiirka Dekadaha iyo Gaadiidka Badda ee Soomaaliya ayaa uga mahad celisay Wasiir Muuse Maxamed, soo dhoweynta diiran iyo martigalinta uu u sameeyay.
Waxanay Wasiir Maryan, Carrabka ku dhufatay sida ay uga go'an adkeynta xiriirka walaalnimo iyo tan derisnimo ee ka dhaxeeya Shacabka walaalaha ah ee labada Dowladood.
Wasiir Maryan, ayaa sheegtay in Jabuuti ay tusaale weyn u tahay taageeridda Soomaaliya ee dhinacyada kala duwan leh, waxayna ku amaantay Jabuuti horumarka ay ka sameysay kaabayaasha dhismaha, gaar ahaan qeybta Dekadaha, Soomaaliyana waxa ay xustay in ay diyaar u tahay in ay ka faa’iideysato waayo aragnimada Jabuuti.
Wafdiga Wasiirka Dekadaha iyo Gaadiidka Badda Soomaaliya oo ay wehliyaan Wasiirka Gaadiidka Jabuuti iyo Agaasimaha maamulka arrimaha Badda ayaa si wada jir ah u kormeeray Dekada Dooraale.
Agaasimaha Shirkadda maamusha Dekadda Dooraale ayaa Wafdiga Soomaaliya la wadaagay awoodda iyo adeegyada ay qabato Dekada.
Ugu dambaynti, Labada dhinac ayaa wada qaatay kulan casho sharaf ah, iyada oo la isku fahmay sidii loo dar-dar gelin lahaa dhammaan waxyaabihii laga wada hadlay.